Eqhelekileyo yaseAndalusian Beachhouse/i-wifi yasimahla/ Amachibi ama-2
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguFran
Ikhaya eliqhelekileyo lase-Andalusi elikwindawo ekhuselekileyo phambi kolwandle enengcango ezivaliweyo. Usapho-friendly. Iphuli ijonge elunxwemeni ngemibono emangalisayo phezu kweLiwa laseGibraltar, izibuko lase-Estepona kunye neentaba zaseMorocco. I-WIFI yasimahla
Iiholide eziqhelekileyo zaseAndalusian kwikhaya leeholide zaseBahia Azul e-Estepona, eCosta del Sol (eMalaga).
Ilungele intsapho kunye nabantwana (amasango avaliweyo) okanye izibini, i-complex iphambi kolwandle.
Imizuzu emi-3 uqhuba ukuya kwizibuko lase-Estepona, apho unokufumana khona zonke iivenkile zokutyela/iivenkile/iivenkile.
I-110m², igumbi lokulala eli-1 elinesibini kunye negumbi eli-1 (linokulala ukuya kuthi ga kwi-4), igumbi lokuhlambela eli-2 (igumbi lokuhlambela eli-1 elikumgangatho ophezulu kubandakanya ishawa, indlu yangasese, isinki ephindwe kabini kunye nebhafu yokuhlambela kunye nendlu yangasese enye ezantsi), umoya opholileyo, amadama okuqubha ama-2, indawo yokupaka yabucala enye + Inkundla yokubheqa e-1 kwikhompleksi. I-2 terrasees (i-1 phezulu, i-1 phantsi ihlulwe kwi-2 kunye nommelwane olandelayo).
* I-Intanethi yeWifi yasimahla
* Ibhedi yomntwana kunye nesitulo esiphezulu (isihlalo sokutyisa) siyafumaneka
* Isixhobo sokomisa iinwele/isixhobo sokolula iinwele sinikezelwe
* Iilinen zebhedi kunye neetawuli zinikezelwe
* Iadaptha zamazwe ngamazwe zinikezelwe
* Umdlali weDVD kunye neeDVD zinikezelwe
Indawo ebumelwaneni yeyona ikhuselekileyo kule ndawo kwaye ihlalwa ziintsapho ezikumgangatho ophakathi/ophezulu + iindwendwe zamazwe ngamazwe.
- Indlu ikufuphi kakhulu ne-H10**** I-Estepona Palace kunye ne-Valle Romano Golf Club ingaphaya kwendlela esuka e-Bahia Azul (ikhompleksi yethu). - yona, unokuhamba uye kwizibuko, iya kukuthatha malunga nemizuzu engama-20.
- I "Rastro" (imarike) yenzeka rhoqo ngooLwezithathu kusasa kufutshane neLidl. Ungafumana amaxabiso amahle kwaye uthenge izikhumbuzo zakho!
-Yonwabela "iFiesta" yasekhaya ngexesha lokuhlala kwakho, zinemibala kwaye ziyonwabisa. Jonga iKhalenda ye-Andalusian Fiestas kwi-intanethi kwaye ucwangcise uhambo lwakho. Yiza uzokufumana indlu eqhelekileyo yaseAndalusi!
Ubumelwane obukhuselekileyo Indawo eGayiweyo Ilungele abantwana ukufikelela ngokuthe ngqo elunxwemeni imizuzu engama-20 ukuya kwizibuko ecaleni kolwandle olunesanti.
Umbuki zindwendwe ngu- Fran
Ndiza kwenza iqela apho uya kuqhagamshelana nokuba nomama okanye umnakwethu. Uya kuba yeyona ndawo iphambili yonxibelelwano ngexesha lokuhlala kwakho kwaye uya kukubonisa ngeenxa zonke ekufikeni kwakho. Umntakwethu uthetha isifrentshi, isiNgesi kunye neSpanish.
Ndiza kwenza iqela apho uya kuqhagamshelana nokuba nomama okanye umnakwethu. Uya kuba yeyona ndawo iphambili yonxibelelwano ngexesha lokuhlala kwakho kwaye uya kukubonisa ngeenxa z…
Inombolo yomthetho: VFT/MA/18371